Iwu Nchịkwa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Iwu nchịkwa
Onye uweojii nwere ike ịchọ onye ọ bụla?
Onye uweojii nwere ike ịchọ onye ọ bụla? na 3 nke ụbọchị na 4 ụbọchị, ọchụchọ ahụ kwesịrị ịmalite. Naanị mgbe ụbọchị atọ ga-amalite ịchọ, ọ dị mwute. Onye ọ bụla nwere ike ịde faịlụ ...
Ego ole bụ ọrụ nchịkwa nke INN mgbe ị gbanwere aha ahụ?
Ego ole bụ ọrụ nchịkwa nke INN mgbe ị gbanwere aha ahụ? Ọ dịghị ma ọlị. TIN anaghị agbanwe agbanwe, ma akwụkwọ ọhụrụ ga-enye aha ọhụrụ. Mgbanwe nke aha ikpeazụ mgbe alụmdi na nwunye Mgbe ị gbanwere aha ikpeazụ mgbe alụmdi na nwunye (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nwanyị ...
Ọ ga-ekwe omume ịme osisi cannabis na Russia na-enweghị iwu iwu?
Ọ ga-ekwe omume ịme osisi cannabis na Russia na-enweghị iwu iwu? Site na iwu nchịkwa nke 19 na May 2010, iwu 87-FZ gbasara osisi ndị nwere ọgwụ ọjọọ gbanwere. Taa ...
Achọrọ m ịlaghachi ekwentị mkpanaaka azụ ahịa
Achọrọ m iweghachi ekwentị m na ekwentị ka ahịa is nwere iwu nke enwere ike ịlaghachi azụmaahịa dị mma na ụlọ ahịa n'ihi “afọ ojuju” n'ime ọnwa. Emejuputara ya n’enweghi nsogbu ...
Kedu usoro iwu maka ide akwụkwọ arịrịọ? Enwere arịrịọ na nchịkọta nke ịdenye aha. Nye template ma ọ bụ dị njikere maka isiokwu ọbụla ma n'ebe ahụ mụ onwe m
Kedu iwu bụ idetu akwụkwọ mkpesa? Naanị arịrịọ na nchịkọta nke saịnụ. Nye ihe ndebiri ma obu njikere maka okwu obula, ma no ebe ahu .. N’iwu dika iwu si di na ntughari uche nke ndi mmadu juru ajuju a - akwukwo a…
Kedu otu mkpebi onyeikpe si dị iche na nkọwa nke ọkàikpe?
Kedu ihe dị iche na iwu onye ọka ikpe na mkpebi onye ọka ikpe? A na-ekpebi mkpebi ahụ SINGLE, mkpebi siri ike bụ mkpebi a na-agabigaghị okwu Nkọwapụta ahụ sitere n'okwu a "ekpebie", na mkpebi bụ n'okwu ahụ "ekpebiri". N'ime nke a na ...
n'ihi na ihe mmebi ka a kụrụ na 15 ụbọchị ?? Ebeekwa ka onye mkpọrọ nọ n'oge a ?? Na bullpen ??
n'ihi na ihe mmebi ka a kụrụ na 15 ụbọchị ?? Ebeekwa ka onye mkpọrọ nọ n'oge a ?? Na bullpen ?? N'ebe ha na-ejide ọnụ, ha na-akụ ndị mkpọrọ na-enyo enyo na ha na-eme mpụ, na nchịkwa na ebe nchekwa dị iche iche. 4.Voronin, ...
ihe atụ nke nkwado, nkwenye na echiche dị na Usoro nke Mmejọ Nlekọta
ọmụmaatụ nke mmachi, dispositions na hypotheses na Usoro nke mmejọ nchịkwa nke Russian Federation Dịka ọmụmaatụ, Art. 20.1 Usoro nchịkwa (perety hooliganism) gụrụ: "1. Petty hooliganism, ya bụ, imebi iwu ọha, na-ekwupụta enweghị nkwanye ugwu maka ọha mmadụ, soro…
Enwere m ikike ịṅụ sịga na steepụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ?
Enwere m ikike ịṅụ sịga na steepụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ? Ja nikogda ne kuril, i rad etomu. Mne 42 :) M zara: Na oge Soviet, iwu kwadoro ...
Kedu ihe m na-eche ihu na agaghị m akwụ ụgwọ?
Kedu ihe m na-eche ihu na agaghị m akwụ ụgwọ? Ha agaghị ekwe ka m jee mba ọzọ) ha agaghị ere biya ọzọ) ọbụnakwa n'ime afọ ise ha ga-achọ ịchọta ha na akpa ego ha, ha agaghị enwe obi ụtọ ọ dịghị onye ...
Afọ ole ka ọrụ nlekọta?
Afọ ole ka ọrụ nlekọta? Dịka iwu n'ozuzu, site na 16 afọ. Ajụjụ dị iche: maka ịzụta ihe onwunwe onye ọzọ, ọ ga-efu 1 puku rubles. Ee, na iwu na-akwadoghị ...
Gwa m otu isiokwu maka mkparị onye ahụ? Ukraine
Gwa m otu isiokwu maka mkparị onye ahụ? Ukraine Nkeji edemede 161 nke Criminal Code of Ukraine Imebi nke nha anya nke ụmụ amaala na-adabere na agbụrụ ha, mba ha ma ọ bụ àgwà ha na okpukpe 1. Ihe omume a na-etinye aka na iji kpalite ...
Byd ejidere PPP, na-egbu ya na ebe ọha na eze.
Ndị ọrụ nkuzi jidere Byd, ebe mmanya na-egbu ya n'ihu ọha. Gịnịkwa ka ha mere gị? Ha dechara ọmarịcha akwụkwọ ahụ wee wepụta ma ọ bụ bute ya na nchekasị n'otu ebe 'dị mma'? ))) Ma obu ...
Ndebanye aha nke umuaka na PDN
Ndebanye aha nke umuaka na PDN site na Federal Law 120-1999 na-adabere na usoro maka mgbochi nke nleghara anya na mmejọ nke ụmụaka anaghị ekwupụta na ozu na usoro nke usoro maka igbochi nleghara anya na mmejọ ụmụaka ...
ị nwere ike ịnakọta nkụ n'ọhịa
ị nwere ike ịnakọta nkụ n'ọhịa nke ifufe na-efesa. The brushwood nwere ike ịbụ, deadwood na osisi nwụrụ anwụ enweghị ike. Dika isiokwu 11 nke Usoro ohia, umu mmadu nweere onwe ha n'enwere onwe ha n'efu na ibi n'ulo ohia na maka onwe ha ...
Kedu ihe a na-ekwu na-enweghị isi na iwu nchịkwa? Kedu ihe bụ ihe ịrịba ama ya? Ihe atụ ndị dị aṅaa ka ị nwere ike inye?
Kedu ihe a na-ekwu na-enweghị isi na iwu nchịkwa? Kedu ihe bụ ihe ịrịba ama ya? Ihe atụ ndị dị aṅaa ka ị nwere ike inye? enweghị ihe ọ bụla: akwụkwọ ahụ nwere ihe ịrịba ama ọ bụla nke mmejọ nchịkwa ụfọdụ, ma ọ bụghị ihe ọ bụla dị adị, ọ bụghị ...
Ugwo maka mgbasa ozi
Ntaramahụhụ maka ikenye mgbasa ozi echere m ma ọ bụrụ na ha chọrọ - ha ga - ekwu kpọmkwem. Ọ bụrụ n ’ikwu na ọ bụghị gị gwọọ ya, mgbe ahụ ịchọrọ ị were otu n’ime ihe abụọ - ma ọ bụ onye njakịrị, mana…
Akwụ ụgwọ maka ịgafe n'okporo ụzọ na-adịghị mma!
Akwụ ụgwọ maka ịgafe n'okporo ụzọ na-adịghị mma! Ọ dị mkpa ịgakwuru ndị uwe ojii okporo ụzọ, ikekwe mgbe ị na-abanye na nchekwa data nchekwa data, onye nyocha ahụ mehiere na ọnụọgụgụ ahụ, n'ihi ya, ụgwọ ahụ kwadobere, mana n'okpuru nọmba dị iche iche ...
Kedu ka esi eme ka ndị ọchịchị mara? Nye ihe atụ plz mkpa n'ezie
Kedu ka esi eme ka ndị ọchịchị mara? Nye ihe atụ plz mkpa n'ezie http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAgreement=trueappealType=defencedivision=1divisionText=РРР РРССР http: // ọchịchị. rf / online / http: // downloads. onyeisi oche. rf / anyanwụ dị mfe. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịghọta na mkpesa ahụ kwesịrị ime ka ọ dị mma ma ...
Nlekọta nchịkwa ??
Nlekọta nchịkwa ?? Nkeji edemede 28.7. Usoro nchịkwa nke nchịkọta nchịkọta 1 nke Russia. N'ọnọdụ ebe, mgbe njirimara nke mmejọ nchịkwa, nyocha ma ọ bụ usoro omume ọzọ nke chọrọ oge dị ukwuu, a na-eme nchọpụta nchịkwa. 2. ...